Hello Nepal News » रोनाल्डो युरोपियन लिगमा अर्को दुर्लभ रेकर्ड नजिक : अब कति खेलमा पूरा होला ?
रोनाल्डो युरोपियन लिगमा अर्को दुर्लभ रेकर्ड नजिक : अब कति खेलमा पूरा होला ?
इटालियन क्लब युभेन्टसका प्रमुख फरवार्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो नयाँ लिग र क्लबमा नयाँ कीर्तिमान नजिक पुगेका छन् । इटालियन क्लबमा उनी १०० गोलको आँकडा नजिक पुग्न लागेका हुन् । रोनाल्डोलाई अब युभेन्टसको जर्सीमा सबैखाले प्रतियोगिताबाट १०० गोलको शतक पूरा गर्न मात्रै ५ गोलको अवश्यकता छ । त्यसपछि रोनाल्डो युरोपियन टप–५ लिगमा तीन फरक–फरक क्लबबाट १०० भन्दा बढी गोल गर्ने एक मात्रै दुर्लभ खेलाडी बन्नेछन् । यसअघि नै रोनाल्डोका नाममा दुई फरक–फरक क्लबबाट १०० भन्दा गोल गर्ने खेलाडीको कीर्तिमान छँदैछ ।
युभेन्टसमा १०० गोल पूरा गरेपछि रोनाल्डो युरोपका टप–५ लिगमध्ये ३ फरक–फरक लिगबाट १०० भन्दा बढी गोल गर्ने एक मात्रै खेलाडी बन्नेछन् । रोनाल्डोले विगतमा इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर युनाइटेडमा २९२ खेल खेल्नेक्रममा ११८ गोल गरेका थिए । त्यहाँ उनले कूल ६ सिजन बिताएका थिए । त्यसपछि रोनाल्डो सन् २००९ मा युनाइटेड छाडेर स्पेनिस रियल मड्रिडमा अनुबन्ध भएका थिए । त्यहाँ उनले कूल ४३८ खेलबाट ४५० गोल गरे । मड्रिडमा रोनाल्डोले कूल ९ सिजन बताएका थिए । रियलमा उनले च्याम्पियन्स लिगमा मात्रै १०५ गोल गरेका थिए ।
सन् २०१८ मा रियल छाडेर युभेन्टसमा अनुबन्ध भएका रोनाल्डोले हालसम्म त्यहाँ १२२ खेलबाट कूल ९५ गोल गरिसकेका छन् । उनलाई अब १०० गोल गर्न ५ चाहिन्छ । युभेन्टसमा तेस्रो सिजन बिताइरहेका रोनाल्डोले सो क्लबका लागि कूल ३३ गोलमा असिस्ट पनि गरेका छन् । उनले कूल १२२ खेलबाट गोल प्लस असिस्ट गरे १२८ गोलमा सोझै योगदान दिएका छन् । रोनाल्डोले पछिल्लोपटक सिरी ए लिगमा क्याग्लिअरीविरुद्ध ह्याट्रिक गोल गरेका थिए । यो सिजन उनले सबैखाले प्रतियोगिताबाट ३० गोल गरिसकेका छन् । सोक्रममा उनले कूल ३३ खेल खेलेका छन् । उनी यो सिजन सिरी ए लिगका सर्वाधिक गोलकर्ता खेलाडी पनि हुन् ।
युभेन्टसमा रोनाल्डोले घरेलु सिरी ए लिगमा कूल ८७ खेलबाट ७५ गोल गरेका छन् । च्याम्पियन्स लिगमा २३ खेलबाट १४ गोल गरेका छन् । बाँकी गोल अन्य प्रतियोगितामा गरेका छन् । जारी सिजनको अन्त्यपछि रोनाल्डो युभेन्टस छाडेर पूर्वक्लब रियल नै फर्किन सक्ने चर्चा अहिले बढेको छ । युभेन्टसमा च्याम्पियन्स लिग जित्न नसकेपछि उनले युभेन्टस छाडेर रियल फर्किन लागेको चर्चा बढेको हो । यो सिजन युभेन्टसले सुपर कप जितिसकेको छ भने च्याम्पियन्स लिगको अन्तिम १६ बाटै आउट भइसकेको छ । यता, कोपा इटालियाको फाइनलमा पुगेको छ भने सिरी ए लिगमा अझै पनि उपाधि होडमै छ ।
प्रकाशित मिति ७ चैत्र २०७७, शनिबार ०८:४१